Doogee N20 Pro: Taleefan cusub oo leh Helio P60 iyo Android 10 | Androidsis
Soosaaraha Aasiya Doogee ayaa ku dhawaaqay cusub Doogee N20 Pro, taleefan casri ah oo cabbirkiisu aad u weyn yahay oo miisaan dhexdhexaad ah u leh suuqa Shiinaha bilowgiisii. Qalabka mobilada ayaa noqonaya mid ka mid ah fursadaha badan ee ay bixiso shirkadda ka dib markii ay ku dhawaaqday Doogee x95 y Doogee S88 Pro sanadkaan 2020.
Iftiiminayaa dhammaystirka maaddada wanaagsan, waxay sifeeyeen naqshadda wax badan, maaddaama ay leedahay shaashad ka ballaaran kuwa birta, taas oo ka dhigaysa inay qabsato kuwa kudhowaad 6,4 inji taasi wax walba ayey siisaa. Waxay ku imaaneysaa seddex midab, si aad u awoodo inaad ku doorato midab ama mid kale qiimo ka hooseeya 110 doolar oo terminalkan uu mudan yahay
1 Doogee N20 Pro, wax walba oo ku saabsan xaddidan gelitaanka cusub
Doogee N20 Pro, wax walba oo ku saabsan xaddidan gelitaanka cusub
El Doogee N20 Pro rakibi shaashad weyn oo ka mid ah 6,3 inji oo leh xal buuxa HD + (1.080 pixels), waxay leedahay saamiga 19: 9 dhalaalkiisuna waa mid kufiican markasta. N20 Pro dhinaca kale wuxuu hirgaliyaa kamarad hore 16 megapixel si sawirro fiican looga qaado, fiidiyowyo looguna sameeyo shirar fiidiyoow oo qumman.
Qaabkan ay adeegsadeen processor MediaTek Helio P60 oo leh qalabka loo yaqaan 'Mali G-72 MP3 graphics chip', wuxuu ku darayaa 6 GB oo RAM ah oo ku filan inuu dhaqaajiyo wax walba, barnaamijyada iyo barnaamijyada, wuxuu kaloo leeyahay keyd ah 128 GB - suurtagalnimada inuu sii ballaadho -. Batariga waa mid aad u weyn, 4.400 mAh oo soosaaruhu wuxuu xaqiijinayaa inuu leeyahay ismaamul in ka badan maalin hawlgalka.
El Doogee N20 Pro gadaal wuxuu leeyahay afar dareemayaal, midka ugu weyni waa 16 megapixels, ta labaadna waa 8 megapixel aalad aad u ballaadhan, tan saddexaadna waa 2 megapixel macro sensor iyo dareeraha qotada dheer ee 2 megapixel. Waxay leedahay isku xidhka 4G-LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 iyo GPS, kuwaas oo dhammaantood kuu oggolaanaya inaad had iyo jeer isku xidho.
MUUQAAL 6.3-inch IPS LCD oo leh xal buuxa HD +
PRORESOR Mediatek Helio P60 8-xudun
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 GB - Suurtagalnimada in la balaadhiyo ilaa 256 GB MicroSD
KAAMARKA DIBADDA 16 MP Sensor Main - 8 MP Ultra Wide Sensor - 2 MP Macro Sensor - Sensor Qoto Dheer 2 MP
Isku xirnaanta 4G - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi - GPS
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 8.8 mm - 175 garaam
El Doogee N20 Pro waxaa lagu qiimeyn doonaa $ 120 laga bilaabo Ogosto 10 illaa 11 (qiyaastii 101 euro si loo beddelo), laakiin waxay hoos ugu dhici kartaa 110 doolar oo leh lambarka xayeysiinta ee shirkadda. Wuxuu ku yimaadaa saddex midab: cawl, guduud, iyo buluug.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Doogee N20 Pro: Taleefan cusub oo leh Helio P60 iyo Android 10
Samsung Galaxy Note 20: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato khadka cusub
Sida loo isticmaalo barnaamijka Google Smart Lock